काठमाडौं, २६ जेठ– प्रख्यात न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको उपचार भइरहेको अस्पताल र परिवारजनले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित खबरहरू सत्य नभएको जनाएको छ ।
देवकोटाको काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा पित्तथैलीको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार भइरहेको छ । आज बिहान एक नोट जारी गर्दै अस्पताल र परिवारजनले डा. देवकोटाको अवस्था स्थिर, गम्भीर र सघन उपचार भइरहेको जनाएको छ । अफवाह फैलिएपछि अस्पताल प्रशासनले उनलाई आज बिहान अस्पताल परिसरमा ल्याएको छ ।
विगत केही समयदेखि पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको ५ महिनासम्म बेलायतको किङ्स कलेज हस्पिटलमा उपचार गराएर गत बैशाखमा नेपाल ल्याइएको थियो । बाँकी उपचार स्वदेशमै गर्ने देवकोटाकै इच्छाअनुसार नेपाल ल्याइएर उनको उपचार भइरहेको छ ।